नेक्ससमा हेल्थ क्याम्प, सबैले निःशुल्क जँचाउन पाउने -
नेक्ससमा हेल्थ क्याम्प, सबैले निःशुल्क जँचाउन पाउने
२ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:०४ April 15, 2022 khullapatiLeaveaComment on नेक्ससमा हेल्थ क्याम्प, सबैले निःशुल्क जँचाउन पाउने
काठमाडौँ – पेप्सीकोला टाउन प्लानिङस्थित नेक्सस इन्टरनेशनल एकेडेमीले नव वर्ष र विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षापछिको समयलाई सदुपयोग गर्न विद्यालयमा हेल्थ क्याम्प आयोजना गरेको छ। हेल्थ क्याम्पमा विभिन्न रोगहरुको निःशुल्क परीक्षण गराउन पाइनेछ । विद्यार्थी अभिभावक र स्थानीयबासीलाई लक्षित गरी हेल्थ क्याम्प आयोजना गरिएको नेक्सस इन्टरनेशनल एकेडेमीका संस्थापक प्राचार्य आरबी कटवालले जानकारी दिए । उनले खुल्लापाटीसँग भने –‘ विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हेल्थ क्याम्प आयोजना गरिएको हो । यसमा सबैले स्वतन्त्ररुपमा सहभागी हुन पाउनुहुनेछ । परीक्षण निःशुल्क हुनेछ ।’
‘अहिले मौसममा देखिएको परिवर्तनसँगै विभिन्न रोगहरु लाग्ने सम्भावना पनि छ । अर्को तर्फ उपचार गर्नुभन्दा लाग्नु नदिनु वेश भन्ने आधारले पनि हामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरु बोलाएर परीक्षण गराउने निधो गरेका हौँ ।’ उनले थप स्पष्ट पारे । हेल्थ क्याम्पमा दाँत सम्बन्धी समस्याको पनि चेकजाँज हुने विद्यालयले जनाएको छ । यही वैशाख ४ गते आइतबार विहान १० बजेदेखि स्वास्थ्य चेकजाँच कार्यक्रम राखिएको विद्यालयले जनाएको छ ।
अभिभावक अभिमुखीकरण पनि हुँदै
नेक्ससले अभिभावकहरुलाई पनि अभिमुखीकरण गर्ने भएको छ । नव आगन्तुक तथा पुराना अभिभावकहरुलाई विद्यालयका नियम कार्यशैलीबारे जानकारी गराउने तथा विद्यालयका योजना पनि सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले अभिभावक अभिमुखीकरण गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।
यही वैशाख ३ गते शनिबार विहान ७ बजेदेखि खहरेस्थित शान बैक्वेटमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको विद्यालयले जनाएको छ । कोरोनाका कारण जमघट हुन नपाइने भएपछि पछिल्ला दुई वर्ष अभिमुखीकरण हुन नपाएकाले यसपटक राखिएको प्राचार्य कटुवालले जानकारी दिए ।
विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा ३ र १० गते
विद्यालयले भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीका लागि प्रवेश परीक्षा खुला गरेको छ । प्रवेश परीक्षा यही वैशाख ३ गते र १० गते हुने विद्यालयले जनाएको छ । नेक्ससमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने नियम रहेको विद्यालयले जनाएको छ । ‘केही सीमित कोटामा मात्र भर्ना खुला गरिएको छ । सिट सीमित भएकाले समयमैँ प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउनुहुन आग्रह गर्दछु । ’ प्राचार्य कटुवालले आग्रह गरेका छन ।
Tagged नेक्सस नेक्सस इन्टरनेशनल ऐकेडेमी
प्याब्सन नयाँ कार्यसमितिले अघि सारेका १३ बुँदा के हुन ?
प्याब्सनको कडा निर्देशन लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक पत्रविना भर्ना गरे सदस्यता रद्ध हुने
आज थप ३८० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १९:५० August 9, 2020 khullapati
विद्यार्थी भर्ना र अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन निर्देशन
२२ बैशाख २०७७, सोमबार २०:४२ May 4, 2020 khullapati
१७ असार २०७७, बुधबार ०८:०१ July 1, 2020 khullapati
कोरोना महामारीमा पनि सक्रिय बनेको नेपाली फुटबल २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:०४
एन्फामा कर्माछिरिङको चार वर्ष, फुटबल खेलमा भयो के ? २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:०४
प्याब्सनको कडा निर्देशन लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक पत्रविना भर्ना गरे सदस्यता रद्ध हुने २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:०४
नेक्ससमा हेल्थ क्याम्प, सबैले निःशुल्क जँचाउन पाउने २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:०४
प्याब्सन नयाँ कार्यसमितिले अघि सारेका १३ बुँदा के हुन ? २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:०४